Istaraatijiyadaha Suuqgeynta Waxyaabaha Doorashada Mareykanka ee 2012 | Martech Zone
Istaraatijiyadaha Waxyaabaha Suuqgeynta ee Doorashada Mareykanka ee 2012
Monday, May 7, 2012 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Hadda waxay umuuqataa kuwa horboodaya inay cadyihiin (wiilkeyga Libertarian wuu diidi lahaa), waxay umuuqataa in labada xero ay dagayaan oo istaraatiijiyadaha qadka ay bilaabeen! Websaydhka Whitehouse laftiisa ayaa loo beddelay hal bog oo weyn oo degitaan ah oo lagu qabsado cinwaanada emaylka, oo looga baahan yahay booqdaha inuu gujiyo si uu u helo macluumaad kasta:
Aqalka Cad ayaa sidoo kale si joogto ah u siidaayay sawirada… on the Daynta Qaranka, qiimaha shidaalka, Iyo xataa heerarka ciidamada ee Ciraaq. Waan ku faraxsanahay in qaababkan la qaatay - laakiin xoogaa waan ka niyad jabay inay xoogaa ka qalloocan yihiin dhinaca maamulka. Waxaan jeclaan lahaa inaan arko qaar ka mid ah faahfaahinta waxa aan fiicnayn sidoo kale - iyo sharraxaad ku saabsan dadaalkaas loogu jiro daahfurnaan buuxda.
Websaydhka ololaha ayaa sidoo kale lagu darayaa taatiko dheeraad ah. Nolosha Julia, tusaale ahaan, waa qaab is-dhexgal macluumaad ah oo qaata booqde iyada oo loo marayo sida ololuhu u doonayo inuu ku caawiyo haweenka noloshooda oo dhan:
Siideynta macluumaadka noocan oo kale ah waxay la socotaa qiimo, in kastoo, iyo hirgelinta Nolosha Julia si weyn ayaa loo dhaleeceeyay oo xitaa dib loo dhisay - waa kan Nolosha Julia sida laga soo xigtay Libertarians:
Ololaha Mitt Romney wuxuu sidoo kale ku darayaa tikniyoolajiyaddii ugu dambeysay sidoo kale, iyadoo la adeegsanayo sawir-gacmeedyo ka kooban fasalka Dhexe, Dhallinyarada, qormooyinka Isbaanishka ee soo bandhigaya aragti ka duwan dhaqaalaha iyo saameynta ay ku leeyihiin qeybahan. Sidoo kale, waxay bixiyeen isbarbardhigga miisaaniyadda federaalka:
Jamhuuriyeyaashu wali waxay umuuqdaan xoogaa gaabis ah qaadashada markay tahay inay si dhab ah ulaxiriirto dadka iyada oo loo marayo warbaahinta bulshada. Nolosha Julia waxaa laga yaabaa in si weyn loo dhaleeceeyo, laakiin sidoo kale waa xeelad si toos ah ugu xirta codbixiyaha dumarka oo si xariifnimo leh loogu qeybiyay da 'kasta. Nolosha Julia ma badali doonto codka dadka dhaliishan… laakiin waxay ku wareejin kartaa codka dhagaystayaasha la bartilmaameedsanayo kuwaas oo laga yaabo inay yeeshaan isla walaacyada uu Madaxweyne Obama sheegayo. Taasi maahan xeelad xumo.
Taasi waxay tidhi - aragtidayda guud ee ku saabsan suuqgeynta dib-u-doorashada Madaxweyne Obama uma muuqato mid u dhow sida loo safeeyey sidii istiraatiijiyaddiisii ​​asalka ahayd. Waxaan afka saaray dhabanka dhajiska (taas oo dad badani ka xanaaqeen), anigoo weydiinaya haddii Obama wuxuu ahaa Vista ku xigta iyadoo lagu saleynayo shaqada cajiibka ah ee ay qabteen. Ma dhaleeceynaynin Madaxweyne Obama - Waan la dhacay oo aan wali la dhacsanahay dardar-gelinta iyo soo jiidashada ololihii uu waday ee soo jiitay dareenka dhalinyarada Mareykanka iyo cod-bixiyaasha wareegaya.
Waxaan rumeysanahay inay jirto cod aad uga duwan istiraatiijiyadda suuqgeynta doorashada ee hadda socota. Mar dambe ma leh isla rajo wanaagsan. Marka la eego sanadihii ugu dambeeyay ee dhaqaalaha aadka u xun iyo qarashka badan, dhawaqa ayaa ah mid aad u adag… oo waxoogaa yar oo wareegaya tirooyinka, xoojinta badan ee wanaagga, iyo tan iyo marmarsiiyadaha xun. Ma dhahayo waa olole xun - waa cod aad uga duwan kii asalka ahaa. Waan arki doonaa waxa ay soo saarto, in kastoo! Waxaan rajeyneynaa in badan oo suuq-geynta suuq-geynta ah dhammaan dhinacyada ay khuseyso!
FIIRO GAAR AH: Siyaasaddu had iyo jeer way adag tahay in lagu daboolo a blog suuqgeynta iyo, inkasta oo dadaal kasta, waxaan hubaa in kuwa idinka mid ah ee taageerayaasha miisaanka leh ee murashax kasta ay dhaliili doonaan tabintayda halkan. Ma isku dayayo inaan cidna u janjeero ama aan cidna taageero - kaliya ka faallo xeeladaha la dejinayo. Fadlan badbaadi tuugadaada musharixiinta iyo bogagga kale ee siyaasadeed.
Statdash: Dhis Khariidadda Ugu Dambeysa
Heerka Dahabka ee Suuqgeynta Mawduuca